Ny Rado Rafalimanana: manao fisolokiana andraikitra sy hosoka ? | NewsMada
Ny Rado Rafalimanana: manao fisolokiana andraikitra sy hosoka ?
«Tsy misy, eo anivon’ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana izany hoe Intergouvernemental Collaborative Action Fund for Excellence (ICAFE)” izany. Io no fanazavana nomen’ny birao mpandrindra ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana eto Madagasikara, araka ny fangataham-panazavana nataon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny Malagasy.
Tsiahivina fa io fikambanana voalaza etsy ambony io no ambaran-dRafalimanana Ny Rado, ombieny ombieny fa izy no misolo tena azy eto Madagasikara, ary ananany fahazoan-dalana diplaomatika manokana (laissez-passer).
Araka izany, manao fisolokiana andraikitra (usurpation de fonction), na koa manao hosoka sy fampiasana hosoka (faux et usage de faux) àry ve izany ity filohan’ny fikambanana Ny Fanahy maha olona ity ? Ankoatra izay, inona no antony mbola tsy hihetsehan’ny fitondrana , manoloana ny fihetsika sy ny fizahozahoana nataony tato ho ato ?